10962 - Advanced Administration automatique à Windows PowerShell
Fitantanana automatique avancé à Windows PowerShell (10962)
TypeFampiofanana any am-pianarana
Azafady sonia in aloha
Very ny tenimiafinao?
Azafady fotsiny manokatra kaonty vao mividy / famandrihana misy antokony.
Mamorona kaonty maimaim-poana!
Fitantanana automatique avancée amin'ny Windows TrainingShell (10962) fampiofanana amin'ny gurgaon
Fitantanam-pitaterana automatique avancée amin'ny Windows PowerShell (10962) fandaniam-bola ao Gurgaon
Institut for Advanced Administration automatique à Windows PowerShell (10962) ao gurgaon
Fitantanana automatique avenue à Windows PowerShell (10962) ao Gurgaon
Fitantanana automatique avancé à certification Windows PowerShell (10962) amin'ny gurgaon
Fampandehanana automaty fitantanana miaraka amin'ny Windows PowerShell (10962) fianarana any Gurgaon
Fitantanana tsara indrindra automatique Administration miaraka amin'ny Windows PowerShell (10962) Training Online
Fitantanana automatique avancée amin'ny Windows TrainingShell (10962)
** Manavotra ny Microsoft Vouchers (SATV) ho an'ny 10962 - Advanced Administration automatique miaraka amin'ny Windows PowerShell Training Course & Certification **
Mpihaino sy fitsipika
Fandaharana & Fees
M10962 - Fitantanana automatique avancée amin'ny Windows PowerShell Training
Mianara manamboatra sy manatsara ny andraikitry ny fitantanana sy ny fitantanana andro ao amin'ny Windows Server Infrastructure. Mianara momba ireo sehatra toy ny famoronana asa miavaka, môdely amin'ny script, ireo toetra amam-panalahidy miavaka sy ny scriptes de scripts. Ianaro ihany koa ny fomba hanatsarana ny sora-tananao amin'ny fianarana momba ny fampiasana diso ny script sy ny fanadihadiana sy ny famoahana ireo rakitra Windows PowerShell. Ny fandaharam-potoana dia hijery ihany koa ny fampiasana Windows PowerShell cmdlets miaraka .NET Framework ary koa manome fahatakarana ny workflow Windows PowerShell.
Ireo tanjonaFitantanana automatique avancée amin'ny Windows PowerShell Training
Asa miasa fanampiny
Cmdlets ary Microsoft .NET Framework amin'ny Windows PowerShell
Eritrereto ny fahadisoana vitan'ny script
Ampiasao ireo antontan-drakitra XML
Mitantana ny fanamafisana ny serivisy amin'ny fampiasana ny fikandrana an'ny fanjakana
Fanadihadihana sy fanesorana scripts
Mpihaino ho an'nyFitantanana automatique avancée amin'ny Windows PowerShell fianarana
IT manam-pahaizana izay te-hianatra ny fomba hananganana fitaovana manokana ho an'ny fampiasana ankapobeny ao amin'ny fikambanana, mampiasa ny vokatra Microsoft rehetra izay manohana ny fitantanana Windows PowerShell
Fitsipika momba nyFitantanana automatique avancé à certification Windows PowerShell
Tokony ho nanao " Manam-pahefana amin'ny Windows PowerShell "Fampiofanana.
Fepetra momba ny fianarana Duration: 5 Days
1. Famoronana asa fanampiny
Mamadika didy iray ho amin'ny asa fanampiny
Famoronana modules script
Famaritana ny toetra sy ny valin'ny fanoratana
Asa fanoratana izay mampiasa fitaovana maro
Fepetra fanoratana izay manaiky ny fidirana amin'ny pipeline
Famoahana ny vokatra famaranana
Fomba fanadihadiana amin'ny alalan'ny fampiasana fanampiana mifototra amin'ny votoaty
2. Mampiasa Cmdlets sy Microsoft Framework Framework amin'ny Windows PowerShell
Fitaovana baiko Windows PowerShell
Mampiasa Framework Microsoft.NET amin'ny Windows PowerShell
3. Scripts amin'ny fanaraha-maso fanoratana
Understanding the Scriptwriting Controller
Sora-kaonty fanaraha-maso fanoratana izay mampiseho User Interface
4. Handingana ny fahadisoana script
Fahatakarana ny fikarakarana diso
Mitana ny hadisoana ao amin'ny script
5. Mampiasa ireo rakitra Data XML
Mamaky, Manipulating and Writing Data amin'ny XML
6. Managing Configures Server amin'ny fampiasana ny Configuration an'ny Firenena
Understanding of Configuration of State
Famoronana sy fampiasana ny Configuration DSC
7. Famakiana sy fanontana scripts
Famakiana sy fandikana ary Soratra efa misy
8. Understanding Windows WorkShell Workflow
Manorata aminay info@itstechschool.com ary mifandraisa aminay amin'ny + 91-9870480053 amin'ny vidin'ny fandaharam-potoana & fandefasana mari-trano, fandaharam-potoana & toerana
Alefaso aminay ny fanontaniana
Ho fanampim-panazavana bebe kokoa Mifandraisa aminay.
Misaotra anareo ary mahafinaritra sy mampahery izany.
Gr8 manohana ny mpiasa. Ny mpampiofana dia mahatsiaro tena tsara amin'ny ITEM. Ny kalitaon'ny sakafo tsara indrindra. tena goo (...)
Mpampianatra tena tsara miaraka amin'ny fahalalana momba ny sehatry ny faritra. Fanamafisana fanofanana tsara.
Fampiofanana mahatalanjona amin'ny fampiofanana mahatalanjona sy fianarana mahafinaritra izany. Grika (...)
Fikarakarana fitantanana ny serivisy
Fianarana fianarana lehibe izany. Manantena aho fa manana fotoam-pivoriana bebe kokoa tahaka izany amin'ny fiainana hafa c (...)
Ny orinasa lehibe misy ny staff personnel sy ny Infra rehetra ilaina. Ny fanorenana ITIL fototra amin'ny (...)
mpitantana, Huawei india
Nataoko ny fotony sy ny ITIL tao amin'ny IT teknolojia tamin'ny volana lasa teo. (...)
Fotoam-pandresena lehibe izany. Mpampianatra dia tsara. Tiako ny fomba fampianarany.
Nalamina tsara ary tsara ny fampiofanana.
Fampiofanana tsara sy mpanofana mahay.
Ny profesionalism dia tsara aseho amin'ny fikambanana misy anao ary ireo entana nampanantenaina rehetra (...)
Hanolotra soso-kevitra izay rehetra mangataka amin'ny institiota ianao mba handray ny FITILAM-BOLY avy amin'ny anao (...)
Ny fampiofanana dia tena tsara. Ny fomba fiasa dia nahatalanjona. Ny mpanazatra dia efa nahomby ary koa (...)
Tena nahafinaritra ny nahazo an'i Chikanna ho mpampianatra anay ho an'ny Selenium. Fitambarana tsara (...)
Ho an'ny matihanina rehetra izay maniry ny hianatra ny selenium ary hahatratra ny CICD ho an'ny automatisation (...)
Ny fiofanana tsara indrindra azoko. Ny mpanazatra dia manana fahaizana matanjaka indrindra amin'ny Java sy Pyth (...)
Fanofanana fiofanana tsara
Good Content Content. Samy mahafinaritra avokoa ny PPT sy ny tanana amin'ny horonan-tsary mifandraika amin'ny modules.
Ny mpanazatra dia matihanina manana fahalalana be dia be, nanazava ny lohahevitr'izy ireo tamin'ny antsipiriany sy ny kl (...)